I-Kirmoitalo: Igumbi-8 eSalla, iArctic Lapland - I-Airbnb
I-Kirmoitalo: Igumbi-8 eSalla, iArctic Lapland
Indlu ebizwa ngokuba 'yiKirmoitalo' ibekwe kumbindi weSalla, idolophu encinci / umasipala waseLapland, eFinland. Njengoko sithetha ngokuzingca: "uSalla - kuMbindi weNdawo" kunye "Nobuhle ngeNdalo". Sijikelezwe yintlango ye-arctic lappish kunye namahlathi amakhulu anamachibi nemilambo emininzi. Idolophu imi malunga. I-40km emantla ukusuka kwi-Arctic Circle. Yiza wonwabele uxolo lwendalo ebusika nasehlotyeni kunye nowona moya ucocekileyo waseYurophu. Iithegi: #LaplandFinland #VisitSalla #WinterWonderland
Ubukhulu begumbi-8 buphantse bube yi-20 sqm. Ilungele intsapho: iibhedi ezimbini zabantu abadala + ibhedi engentla kwenye yabantwana ababini (ubukhulu be-140cm x 60cm, ukuphakama kwe-100cm)
Umgangatho wokuqala: Sinikezela ngendawo yokuhlala kwihostele yabantu abayi-16. Amagumbi okulala ayi-8/iibhedi eziyi-16, enye yazo yiflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi ayi-2 (amagumbi ayi-5 ukuya kwayi-6 adibeneyo) kunye neebhedi eziyi-3. Yahlula ikhitshi kunye negumbi lokutyela, i-sauna, iishawa ezimbini kunye nezindlu zangasese ezine ezisetyenziswa ngumntu wonke. Indlu yamaplanga enendawo yomlilo evulekileyo ingaphandle emva kwendlu. Indawo yokupaka imoto esimahla. Ungabhukisha igumbi usuku olunye okanye eziliqela, iiveki okanye iinyanga ngokokuthanda kwakho. Isidlo sakusasa nesasemini kunye neenkonzo zesidlo sangokuhlwa azinyanzelekanga kwaye ziyafumaneka kwisicelo nakumaxabiso ahlukileyo.
IZINTO EKUFUNEKA UZIBONELE, UZENZE & UBE AMAVA
Yiza ubone izibane ezisemantla - i-aurora borealis - ixesha lonyaka ngoku!
IINKONZO: Indlu ikufuphi neziko ledolophu encinci. Iivenkile ezimbini zegrosari kunye neendawo zokutyela ezimbini, iivenkile ezimbalwa, ibhanki, ithala leencwadi, imyuziyam kunye ne-ofisi yolwazi lwabakhenkethi baseSalla - zonke zingaphakathi kohambo lwe-10-15min ukusuka endlwini.
IMIDLALO NENDALO: ESalla uneSalla Ski Resort ekufutshane kumgama nje oyi-5min (10 km's) - kunye nabanye abathathu kumgama omfutshane weyure e-1 yokuqhuba (iSuomu, iPyhä-Luosto kunye neKuusamo). Konwabele ukukhwela intaba kunye nokunyuka intaba, ukutyibilika ezantsi, ukutyibiliza, ukutyibilika ekhephini, ukuhamba ngekhephu, ukukhwela ibhayisekile yasebusika efatbike, i-reindeer kunye ne-husky safaris njengoko uthanda.
Kukho i-spa, i-SnowLounge, i-bowling alleys, iholo yomkhenkce yangaphakathi, iholo yezemidlalo, i-mountainbike / inkonzo yokurenta i-fatbike kunye nothungelwano olugqwesileyo lweendlela zokuhamba eziphawulweyo ngaphakathi kwemizuzu emi-5 umgama wokuqhuba ukusuka kwindawo yethu. Sine-160km iingoma zokutyibiliza ezinqumla ilizwe apho i-43km zikhanyisiwe.
IIPARKI ZIKAZWELONKE: Kukho iipaki zesizwe ezine ngaphakathi nje kweyure enye yokuqhuba umgama ukusuka eSalla (Oulanka, Riisitunturi, Pyhä-Luosto, Syöte).
Umda wokuwela kwindlela eya eRashiya ifumaneka kwiikhilomitha ezingama-22 ukusuka kumbindi wedolophu yaseSalla.
ULWAZI LOKHENKETHO NOKHENKETHO:
Ulwazi lwabakhenkethi baseSalla: (Iwebhusayithi ifihlwe nguAirbnb)
I-Salla Ski Resort: (Iwebhusayithi ifihlwe ngu-Airbnb)
Ipaki yaseSalla Reindeer: (Iwebhusayithi ifihlwe nguAirbnb)
Siza kudibana nawe ekufikeni kwaye sikubonise igumbi lakho kwaye ujikeleze indlu ukuze uzive usekhaya ngokukhawuleza. Inombolo yomnxeba yenkonzo ye-24/7 inikezelwe.